Marka aad indhaha ku heynaa in ay beddelaan ka phone Windows in an iPhone macruufka socda 9, aad dooneyso in aad ogaato habka ugu fudud ee xogta ka mobile jir wareejiyo mid cusub. Inkasta oo ay jiraan codsiyo dhowr ah oo ay diyaariyeen mid ka mid ah ganacsato ah oo kaa caawin kara in aad hesho shaqo lagu sameeyey, midkoodna waa ku filan oo hufan si ay u bixiyaan hab fudud oo dareen leh si ay u gudbiyaan xogta.
Si aad farqiga u dhexeeya labada dhufto sheegay, Wondershare horumariyo qalab wax ku ool ah loo yaqaan MobileTrans . MobileTrans Awood u xogta aad ka phone jir wareejinta in ka mid ah oo cusub oo si fudud loo eegin madal ee nidaamyada hawlgalka ka mid ah ilaha iyo caga telefoonnada gacanta ku.
Wondershare MobileTrans Waxaa laga heli karaa labada kombiyuutarada Windows iyo Mac. Taas macnaheedu waa in loo eegin nooca computer iyo nidaamka qalliinka aad isticmaasho, waxaad ku rakibi karaa codsiga aad kombuutarka oo ka dhigi kartaa xogta oo dhan habka wareejinta ka mid phone si fudud kale.
Waxaad kala soo bixi kartaa version ku haboon ee Wondershare MobileTrans for your computer ka ay si rasmi ah, oo xiriir la download labada Lahjadaha barnaamijka la siiyo hoos ku qoran:
Qaar ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee in Wondershare MobileTrans dalabyo ka-users dhamaadka ay kala yihiin:
Phone in Transfer Phone - Tani dhisay-in feature codsiga kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan xogta aad ka mid phone in kale si toos ah, tusaale ahaan, iyada qaadashada gurmad ah ee aad PC. Si aad u isticmaasho habkaani, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa, isku xiro labada isha iyo qalabka socdaan in ay your computer isku mar la isticmaalayo fiilooyinka ay xogta u dhiganta.
Kaabta - Marka laga madal nidaamka qalliinka lagu rakibay qalab mobile-macmalay by iibiya kasta, Wondershare MobileTrans kuu ogolaanaya in aad dib oo dhan ku jira. Xogta xoojiyaa noocan oo kale ah la soo celin karin ee ay u qalab la mid ah mar kasta oo loo baahan yahay ama waxa ay sidoo kale kartaa in la soo celiyo si ay u qalab kala duwan, kaasoo noqon kara kiiska marka la wareegaya phone cusub, gaar ahaan ka iibiya oo kala duwan ama wadajir boosteejo ah oo kala duwan.
Soo Celinta - Tani feature boosaska badan kuu ogolaanayaa inaad si loo soo celiyo xogta ma aha oo kaliya ka Wondershare MobileTrans files gurmad, laakiin sidoo kale ka files ee laga helay ilo kala duwan, sida Lugood, iCloud, ama BlackBerry.
Erasure Phone Full - Iyadoo Doorashadan, aad qaban karto erasure buuxda oo qalab mobile. Tani waxay ku yimaado anfacaya marka aad rabto in aad iibiso phone in qof dibada ah, oo aadan rabin in macluumaadkaaga shakhsiyeed la kulmin dadka aan la aqoon.
Ka Your Windows Phone beddelashada Data si iPhone la macruufka 9 Isticmaalka Wondershare MobileTrans
Isticmaal link kor ku soo bixi Wondershare MobileTrans on your computer Windows.
Ku rakib barnaamijka soo bixi adigoo isticmaalaya habka loo xirxiro si joogto ah.
Isticmaal fiilooyinka xogta asalka ah ee aad telefoonka iPhone Windows iyo in ay ku xidhmaan labada qalabka si aad computer Windows isku mar.
Burcad Wondershare MobileTrans.
Laga soo bilaabo interface ugu weyn, riix Phone in Transfer Phone leben.
On shaashadda soo socda, sug ilaa iyo inta Wondershare MobileTrans ogaadaa labada telefoonada iyo bandhigayaa walxood oo ay ku muraayadood u dhiganta.
Fiiro gaar ah: Haddii ay dhacdo in taleefanada aan la kaalinta hoos muraayadood sax ah, waxaad riixi kartaa Flip button ka sare ee ay leeg- xarunta. Natiijada u dambaysa waa in in phone Windows waa in hoos Source Murayaad ee bidix, oo iPhone waa in hoos Destination mid xaq.
Sug ilaa MobileTrans Wondershare ogaadaa dhamaan xogta loo wareejin karo in aad telefoon Windows leeyahay qaab ee ay leeg- xarunta.
Marka sameeyo, in ay leeg- xarunta laftiisa, hubi checkbox waxaa matalaya xogta in aad rabto in lagu wareejiyo si aad iPhone.
Fiiro gaar ah: Waqtiga qoraalkan, Wondershare MobileTrans yahay oo kaliya awood ee sawirka, muusigga, iyo video files ka phone Windows ku wareejinta. Si ay u gudbiyaan xiriirada si aad iPhone socda macruufka 9, waa in aad iyaga gadaal ilaa OneDrive oo markaas iyaga wareejiyo cusub iPhone halkaas ka.
Optionally, ka hooseysa ay leeg- caga in xaq ah, waxaad ka hubin kartaa xogta oo cad ka hor inta nuqul checkbox in masixi dhammaan xogta jira ka iPhone.
Fiiro Gaar ah: Tani waa mid waxtar leh haddii iPhone waa jir ah oo ka kooban xogta in mar dambe ma aad doonayn in ay adeegsadaan.
Ka dib markii xulashada waxyaabaha la doonayo in aad si ay u gudbiyaan, riix Start Copy button ka hooseysa ay leeg- xarunta.
On suuqa kala socda in fureysaa, sug ilaa iyo inta waxyaalaha la doortay ayaa lagu wareejiyo si aad iPhone cusub.
Riix OK marka loo sameeyo.
Barkinta labadaba telefoonada ka your computer, guuleysatey aad iPhone, iyo bilaaban waxaa sida caadiga ah la isticmaalayo.
Kala beddelashada ee kaabta OneDrive in macruufka 9 Isticmaalka Wondershare MobileTrans
Hubi in kombiyuutarka ku xiran internetka.
Hubi in aad haysato aqoonsiga saxda ah (username iyo password) si OneDrive ay ku jiraan gurmad Xiriirada ka telefoonka Windows.
Isticmaal cable xogta in ay ku xidhmaan aad iPhone socda macruufka 9 kombuyuutarka.
Laga soo bilaabo ay interface ugu weyn, riix Soo Celinta From hayaan leben.
Laga soo bilaabo fursadaha la heli karo, riix OneDrive button.
On suuqa kala socda, ka Murayaad bidix, riix Aayad ee badhanka.
In Beerihii heli karaa Aayad in sanduuqa in booda, nooca username xisaabtaada OneDrive iyo password oo guji Sign in .
On sanduuqa ku xiga, guji Haa in ay sii wadaan.
Marka xisaabtaada waa la falanqeeyay, calaamadi sanduuqa Xiriirada checkbox ka Murayaad xarunta.
Oo salka uu ah meel loo ahaadana iyadaa Murayaad in xaq, riix xogta oo cad ka hor inta nuqul checkbox in masixi dhammaan xogta jira ka iPhone. (Ikhtiyaar)
Marka sameeyo, riix Start Transfer button ka hoos ku Murayaad xarunta.
On suuqa kala socda, sug ilaa iyo inta Wondershare MobileTrans ku wareejinaya xiriirada ka OneDrive in aad iPhone.
Inkasta oo xogta aad ka phone jir Windows cusub aad iPhone wareejinta waa hawl adag, Wondershare MobileTrans ayaa fududeyneysa habsocodka ay kuu oggolaadaan in aad wareejiso sawirrada yaraan iyo files warbaahinta oo aan ku lug leh barnaamijka wax-saddexaad.
Siduu u BUSlink Data Recovery
> Resource > Ladnaansho > habka ugu fudud ee ay u gudbiyaan Windows Phone in macruufka 9